लिङ्देनको दवावमा रोकियो मुस्लिम विश्वविद्यालयको उद्घाटन
काठमाडौं। झापाको केचनकलनमा मुस्लिम विश्वविद्यालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र का कारण रोकिएको छ। गतसाता उक्त विश्वविद्यालय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजकुमार शैख मोहम्मद बिन मोक्तुम बिन जुमा अल मक्तुमले उद्घाटन गर्ने कार्यसूचि थियो। तर, लिङ्देनले राज्यशक्ति प्रयोग गरेर त्यसलाई रोकेको सरोकारवालाको आरोप छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजकुमार शैख मोहम्मद बिन मोक्तुम बिन जुमा अल मक्तुम ४ असारको बिहान काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिए। त्यसको केही समयमै उनी श्रीएअरमार्फत झापाको भद्रपुर हुँदै बिर्तामोड पुगे।
बिर्तामोड पुगेको भोलिपल्ट ५ असारमा राजकुमार अल मक्तुमका दुई वटा औपचारिक कार्यक्रम थिए। अल मक्तुम भद्रपुर विमानस्थलमा अवतरण गर्नु केही समय अघि मात्र त्यहाँको भिआईपी कक्षमा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल एवं बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले सञ्चारकर्मीसँग संवाद गरेका थिए। संवादमा प्रसाईले अल मक्तुमले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको पेट सिटी उपकरण र केचनाकवलमा मुस्लिम विश्वविद्यालयको उद्घाटन गर्ने जानकारी दिएका थिए। प्रसाई तिनै पात्र हुन्, जसले राजकुमार अलमक्तुमलाई नेपाल ल्याएका थिए।
राजकुमार अल मक्तुम ५ असार अपरान्ह केचनाकवल गएर मुस्लिम विश्वविद्यालय उदघाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, उनी केचनाकवल जाने समय नजिकिँदै गर्दा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिन नसक्ने भन्दै मुस्लिम विश्वविद्यालय उद्घाटन नगर्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ। गृह मन्त्रालयले नै राजकुमारको सुरक्षा दिन नसक्ने एवं मुस्लिम विश्वविद्यालय उद्घाटन नगर्न दबाब दिएपछि उनको केचनाकवल भ्रमण रद्द भएको थियो।
यसपछि ‘राजकुमार अल मक्तुम नक्कली भएको र उनलाई सरकारले सुरक्षा नदिएको’ भन्दै केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको थियो। राजकुमार अल मक्तुमलाई निमन्त्रणा गरी नेपाल ल्याएका बिएण्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रसाईले सरकार र राप्रपा (राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी) का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको दबाबमा मुस्लिम विश्वविद्यालय उद्घाटन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। लिङदेन झापाको त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्।
मुस्लिम विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक काम अघि बढाउन एक करोड रुपैयाँमा आफूले एक बिगाह जग्गासमेत खरिद गरिसकेको प्रसाईको भनाइ छ। ““युएईका राजकुमारले मुस्लिम विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक आर्थिक सहयोग गर्ने बचन समेत दिनुभएको थियो। तर, सरकार र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलगायत दृश्यअदृश्य शक्तिको दबाबमा उद्घाटन नै स्थगित गर्नुपर्‍यो”, प्रसाईको भनाइ छ।
नेपालमा संस्कृत र बौद्ध विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। सरकारले नेपालका मुस्लिमहरुलाई मक्का मदिना जान वार्षिक रकम दिँदै आएको छ। मदरसाको पढाईलाई पनि मान्यता दिएको छ। तर, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले नै उद्घाटन रोकेको गृह स्रोतको दावी छ। उक्त स्रोतका अनुसार भारत सरकारको दबाबमा झापाको केचनाकवलमा मुस्लिम विश्वविद्यालय उद्घाटन कार्यक्रम रोकिएको हो। केचनाकवल नेपाल–भारत सीमा नजिकै पर्छ। केचनाकवलमा मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना भए आफ्नो देशमाथि सुरक्षा खतरा हुने निष्कर्षमा भारत सरकारले नेपालस्थित आफ्नो दुतावासमार्फत सरकारलाई दबाब दिएपछि गृह मन्त्रालयले उद्घाटनामा रोक लगाएको स्रोतको भनाइ छ।
यद्यपि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फडिन्द्रमणि पोखरेल यसबारेमा आफुहरु (गृह मन्त्रालय) लाई केही जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘कसले के बोल्छ ? हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ? हामीले सुरक्षाका बारेमा त्यस्तो केही भनेका थिएनौं। हामीले त्यस्तो खाले सुरक्षा दिदैनौ पनि’, पोखरेल भन्छन्, ‘मुस्लिम विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा कसरी आएको थियो। आन्तरिक रुपमा कसरी रोकियो, मलाई थाहा भएन।’